Mepụta ihe kachasị ndị ahịa ahịa | Martech Zone
Ọ bụ ezie na continuesntanetị na-aga n'ihu na-agbanwe ma ọ dịwo kemgbe iri afọ ole na ole, ụwa maara nke ọma otu esi emepụta ezigbo ahụmịhe ndị ahịa. Myirịta dị n'etiti ụzọ isi emeso ndị ahịa ihe ihu na otu ị si emeso ha ihe n'ịntanetị yiri nnọọ mgbe ị na-anwa ịmepụta ahụmịhe kachasị ndị ahịa.
Infographic nke Monetate: Ndị na-azụ ahịa na-atụ anya ka mmekọrịta dị n'ịntanetị dị oke mkpa na ụdị. Maka ọtụtụ azụmaahịa, ike ịnye ezigbo ahụmịhe ndị ahịa na ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ ka bụ ihe ịma aka. Chọpụta otu esi atụgharị asụsụ ezigbo ahụmịhe ndị na-adịghị n'ịntanetị n'ịntanetị na ihe omuma a.
Tags: ule uleezubere iche maka omumegeotargetingnnwale dị iche icheezubere icheEbumnuche TeknụzụuruEbumnuche nke ihu igwenjikarịcha weebụsaịtịule weebụ
WordPress maka obere azụmahịa